Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဂွမြို့တွင် ဖမ်းမိသော ဘင်္ဂါလီ တစ်ရာခန့် ကို စစ်ဆေးရန် သံတွဲ ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့  အနီးတွင်ရှ်ိသော ကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင် တရားမ၀င် ၀င်ရောက် လာသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ၁၀၀ နီးပါးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် လူများအနက် အချို့ကို စက်လှေတစ်စင်းပေါ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဂွမြို့တွင် ငါးဖမ်းရှာနေသည့် ဒေသခံရေလုပ်သား အချို့က တွေ့ရှိခဲ့ရာ တာဝန်သိ ဒေသခံများက သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း ယင်းအကြောင်းကြားမှုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် အဆိုပါကျွန်းသို့ ထွက်ခွာပြီး လိုက်လံ ရှာဖွေရှာ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူ လူဦးရေ ၁၀၀ နီးပါးခန့်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ယင်းတို့ကို ဂွမြို့သို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"လူတွေကများတော့ အတိအကျ စာရင်းကို ကျွန်တော်တို့မရလိုက်ဘူး ဖမ်းဆီးလာတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ကားပေါ်တင်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ ရေတွက်ကြည့်လိုက်တာတော့ ၈၈ ဦး တွေ့ခဲ့ရပါတယ် သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက သံတွဲရဲစခန်းကို ပို့ဆောင် လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ၊သူတို့ ဘယ်ကနေ၀င်လာပြီးတော့ ဒီကျွန်းကို ဘယ်အချိန်ကတည်းကရောက်နေတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း အတိအကျမသိရသေးပါဘူး " ဟု ငါးဖမ်းစက်လှေပိုင်ရှင် ဒေသခံတစ်ဦးက Flower News သို့ပြောကြားသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက "ဒီသတင်းဟာ မှန်ကန်ပါတယ် လူ ၁၀၀ နီးပါးလောက် ရှိမယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ် ဒီလူတွေကို အခုဆိုရင် သံတွဲရဲစခန်းက ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် " ဟု ပြောကြားသည်။
ဂွမြို့သို့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူများကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် အဆိုပါကျွန်းကို ရောက်ရှိရန် ဂွမြို့မှ စက်လှေဖြင့် တစ်နာရီ ခန့် အချိန်ယူပြီးသွားလာရကြောင်း သိရသည်။
"ပြည်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ယခုဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အခြေအနေဟာ ယခုအချိန်အထိ ယခင်လို မဖြစ်သေးတာကိုလည်း ကြားနေရပါတယ် အထူးသဖြင့် ဒီလို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ လူတွေကို စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လုံခြုံရေးကို ယခင်ထက် ပိုပြီးတော့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆောင်ရွက် ဖို့လည်း လိုအပ်လာပါလိမ့်မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အနီးမှာရှိတဲ့အတွက် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ သူအများစု ဟာလည်း ရေကြောင်းကို အသုံးပြုပြီးတော့ ၀င်ရောက်နေကြတာကို ယခင်ကလည်း ကြားသိနေရသလို ယခုဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဂွ မြို့ဘက်ကိုတောင် ၀င်ရောက်လာတာကို တွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်နောင် ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေ ထပ်မံမပေါ်ပေါက်လာဖို့ကတော့ နိုင်ငံတော် အစိုးရအနေနဲ့လည်း ရေပြင်လုံခြုံရေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလို ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ ကျွန်တော် မြင်ပါတယ် " ဟု စက်လှေပိုင်ရှင် ဂွမြို့ဒေသခံတစ်ဦး က အကြံပြုပြောကြားသည်။
စောမြင့်သန်း(ပေါက်တော)( Yangon Media Group)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 04:51
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဂွမြို့တွင် ဖမ်းမိသော ဘင်္ဂါလီ တစ်ရာခန့် ကို စစ်ဆေးရန် သံတွဲ ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပြီ . All Rights Reserved